Layma's World: ရေးဖူးတဲ့ ကဗျာ…
“လေးမ ရဲ့ Blog မှာ ကဗျာလဲ မရှိဘူး” လို့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောလို့မခံချင်တာနဲ့သစ်ရွက်လှုပ်တိုင်း ကဗျာရေးချင်တဲ့ အချိန်က ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို သော့ခတ်ထားတဲ့ စာအုပ်ထဲကနေ သော့ဖျက်ပြီးတော့ ကူးပေးလိုက်ပါတယ်…….။ ခေါင်းစဉ်ကတော့ အခုမှ ကောက်ခါငင်ခါ ပေးလိုက်တာပါ…….။
“လေးမ နှင့် ကောင်းကင်”
မြေကြီးကို ငုံ့ ကြည့်
ငါကတော့ စိတ်မော…..လို့ …….။
လက်ကမ်းလို့ကြိုတတ်ပါရဲ့…….
လှမ်းခိုဖို့ခက်နေလို့ ………။
ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတော့လဲ.....
ရုန်းမရတဲ့ အချစ်တွေနဲ့ 
လှိုက်လှဲစွာ ချစ်ခဲ့တယ်…….။ ”
Posted by Layma at 5:43 PM
ကျေးဇူး..ကျေးဇူး..ကျေးဇူး ... များစွာ ..........
“ကမ်းကြိုတဲ့ လက် .....
လှမ်းခိုဖို့ခက် ”
မိုက်မဲ…..လှိုက်လှဲ .... ချစ်ခဲ့တယ် ...
ကောင်းလိုက်တဲ့ ငယ်ကဗျာလေးဗျာ ... အတွေးလည်း ကောင်းတယ် ... စကားလုံးတွေလည်း ကောင်းတယ် ...
မုန့်ဝယ်ကျွေးဖို့ သင့်နေပြီဗျ ... ဟာ ..ဟ ... တကယ်ပြောတာပါဗျာ ...
စာအုပ်ထဲမှာ အကျဉ်းကျနေရရှာတဲ့ ကဗျာလေး ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တာ ကျေးဇူးပါဗျာ ...
နှစ်တွေကြာခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့ ... လတ်ဆတ်ချိုမြနေတဲ့ ကဗျာလေးပါပဲ ...
ဒီကဗျာလေးကို ဝေမျှပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အထူးပါ ... ကျန်နေသေးတဲ့ ကဗျာ အကျဉ်းသားတွေကိုလည်း လွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ် ...
ယခုပြုရ ကုသလကြောင့် ကင်းကောင် ကြီးနဲ့ ... အဲ ဟုတ်ပါဝူး ... ကောင်းကင်ကြီးနဲ့ အဆင်ပြေပါစေဗျာ ...
လေးမ ပြောင်းပြန်ပဲ ယူရမှာလား.. ကင်းကောင်ကြီးနဲ့ ဆိုတာဟုတ်လား..
ဟဲ နောက်တာပါ.. ကဗျာလေးက ကောင်းတယ်.. ဟစ်ဟော့ပဲ
လေတိုက်သော နေ့တစ်နေ့ ။
*သော့ တွေ ပြင်တယ် ၊ ဖျက်တယ် ။* *စာအုပ် ဟောင်းဒွေ ၊ စာရွက် အဟောင်းဒွေ ၊ ကာတွန်းစာအုပ် အဟောင်းတွေ ၊ ဆေးပုလင်းအဟောင်းတွေ ပိုက်တွေ ၀ယ်ဒယ်* *သံတို အစအနတွေ ၀ယ်ဒယ် * *ကြက်ပေါင်း စွပ်ပြုတ်နဲ့ လဲဒယ်* *ပြင်ဒယ်* *၀ယ်ဒယ်* *လဲ...သည်*
ကောင်းတယ် လေးမရေ နောက်လဲ ရေးနော် အားပေးတယ်
မုန်တိုင်း….မုန့် ကျွေးပါ့မယ်….ဟား…ဟား…လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ပါတဲ့လား… ဟုတ်…စဉ်းစားပေးမယ်…..
မပန်….ကျေးဇူးပါ….စိုင်းစ်ိုင်းကို လက်မတို့ လိုက်နဲ့ နော်….
နိုင်…..ထမင်းကြော်နဲ့ လဲတယ်…..နှင်းဆီပန်းနဲ့ လဲတယ်…..
ခရီရေတာ…..ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူး….နောက်ရေးဖြစ်ဖို့ ကတော့……
ကဗျာလေးက တစ်ပုဒ်ဆို တစ်ပုဒ်ဆိုသလောက် ကောင်းပါတယ်ဗျာ။
ကဗျာလေးက လှတယ်နော် . . .
နောက်ထပ် ကဗျာတွေလည်း ဖတ်ချင်သေးတယ် ။
mi…မချွန်နဲ့ နော်….နင်ဘယ်မှာလဲ…ဖုန်းလဲ မဆက်ဘူး….သရဲမ….
ပေါက်ပေါက်ရေ….မလေးက ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်လေ….